La Dagaalanka Kalluumeysiga & Sanduuqa Qalabka Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad Shixnadaha Kalluumeysiga & Sanduuqa Qalabka
Warbixinta Shahaadada & Imtixaanka
Bac jilicsan oo jilicsan
Dhexdhexaad Soft Soft
Boorsada boorsada qabow ee weyn
Kaadiheysta Kaydka Weyn ee Furitaanka
Kaadiheysta Biyaha Furitaanka Yar
Bacda Biyaha Qubeysa
Bacda & boorsada biyuhu
Bacda Quusidda biyuhu
Bacda Duffel ee biyuhu
Boorsada Kaamamka Biyo La'aanta ah
La Dagaalanka Kalluumeysiga & Sanduuqa Qalabka
Sanduuqa Kalluumaysiga Jilicsan
Daabacaadda Sanduuqa Waxkaqabashada Kalluumeysiga
Bacda kaadi haysta
Dhalada Biyaha Cayaaraha
Bac yar oo qaboojiye ah
Qabow jilicsan dhexe
Kaadiheena weyn ee furitaanka
Boorsada biyaha oo yar
Bacda quusidda ee biyuhu xiraan
Boorsada kaamamka biyuhu galaan
Sanduuqa sasabashada kalluumeysiga
Daabacaadda sanduuqa kalluumeysiga
Dhalada biyaha isboortiga
Bag Buckle Bag Boorsada Safarka
Meel Jilicsan oo Meel Bannaanka ah
Camping Ice meeldhexaadka ah biyuhu
Qaboojiyaha la qaadan karo ee TPU Bannaanka
Bag Boorsada boorsada aan biyuhu lahayn
Taxanaha Casriga ah ee Sanduuqa Kalluumeysiga Dibadda
Sanduuqa kalluumeysiga ee kalluumeysiga ah oo leh dabool waxtar leh, naxdin iyo hoos u dhac iska caabin ah, isku-buuq furi kara Waxaa loo isticmaali karaa in lagu keydiyo qalabka kalluumeysiga, sida sedka, kallunka kalluumeysiga, iwm, iyo sidoo kale aaladaha iyo agabyada qaarkood, oo leh shaqooyin kala duwan.
Shayga Maya: BX011
Faahfaahinta: 198 * 145 * 40mm
Awoodda: 18 Qaybood
Midabka: Transparent / purple
Isticmaal: Kalluumeysiga bannaanka
Feature: La qaadan karo
Sanduuqa taakulaynta kalluumeysiga oo leh qaybiyeyaal la isku hagaajin karo
Kalluumeysiga sanduuqa siyaada ah ee kuu gaarka ah, kaaliyahaaga wanaagsan ee kalluumeysiga dibadda. Si sax ah u keydi qalabkaaga kalluumeysiga, qabatooyin, sed, iwm Naqshadeynta waa sahlan tahay oo fududahay in la qaado.
Sanduuqa Kalluumeysiga Kalluumeysiga
Sanduuqa kalluumeysiga ee bannaanka, sanduuqa wax lagu keydiyo, sanduuqa sedka, kani waa sanduuqa kalluumeysiga ee kalluumeysiga hufan oo leh kala qeybiyeyaal la isku habeyn karo oo leh shaqooyin badan.
Custom Box Kalluumeysiga Kalluumeysiga Sanduuqa
Sanduuqa keydinta qalabka kalluumeysiga oo leh qaabab u gaar ah. Waad habeyn kartaa qaab kasta oo aad rabto dusha sare si aad u muujiso shakhsiyaddaada astaanta ah.
Sanduuqa Lure Box iyo White Daabacaadda Sanduuqa Lure
Midabka liinta iyo kan cad ayaa si buuxda u muujinaya dhadhanka moodada. Daabacaadda dusha sare ayaa iftiiminaysa shakhsiyaddaada xitaa inbadan. Dabcan, waad daabacan kartaa astaanta astaantaada si aad u muujiso qiimahaaga astaanta badan. Sanduuq kalluumeysi oo adag, wax ku ool ah iyo muuqaal ah. Tani waa doorashadaada ugu fiican. Muuqaalku waa wax fiican oo naqshadda gudaha waa xariifnimo, ku habboon goobaha kalluumeysiga kala duwan.
Sanduuqa Taakulaynta Kalluumeysiga Madow iyo Caddaan oo leh Qaybiyeyaal laysku hagaajin karo
Sanduuq kalluumeysi oo madow iyo caddaan ah. Daboolka ugu sarreeya ee madow, jirka ugu weyni waa caddaan hufan, waxaad arki kartaa qaybinta gudaha oo ay fududahay in alaab la helo. Naqshadda qolku waxay qaadi kartaa walxaha cabbirro kala duwan leh. Naqshad fudud, majiro shiddo adag, fududahay in la isticmaalo. Qufulku waa mid adag oo aan si dhib yar loo dhaawicin.
Kalluumeysiga Kalluumeysiga Sanduuqa Kalluumeysiga Sanduuqa Madow
Saddex taxane madow oo sanaadiiqda kalluumeysiga ah. Transparent + madow, madow + hufan, iyo madow oo dhan. Waxaad ku dooran kartaa si xor ah hadba baahidaada. Gudaha wuxuu u qaybsan yahay naqshad shabaqeed, kalaqeybinta waa la kala jari karaa waana la dhaqaajin karaa, gudahana waxaa lagu soo ururin karaa cabirka aad u baahan tahay, bilaash iyo dabacsanaan, kuna habboon in la isticmaalo.
Lake Sanduuqa Kalluumeysiga Dibadda
Sanduuqa kalluumeysiga cusub ee buluugga ah waxaa lagu heli karaa buluug buuxa iyo tarjumaad aad dooratay, iyo naqshadeynta ku habboon ee isticmaalaha ayaa sahlan in la qaato oo la qaado. Cabbir yar, awood weyn, ka faa'iideysiga meel sare. Waxyaalaha balaastigga ah ee deegaanka u fiican, jirka sanduuqa translucent, waxyaabaha kaydinta gudaha ayaa si cad u jaleecsan.
Sanduuqa Taakulaynta Cad ee Caaga ah
Sanduuq kalluumeysi caag ah oo hufan, oo ka samaysan waxyaabo bey'adda u roon oo aan lahayn BPA, wuxuu leeyahay 18 qaybood, oo si xor ah loogu hagaajin karo si ay u qaabeeyaan qalabkaaga cabbirro kala duwan leh. Cidhifyada wareegsan kama dhaawaceyso gacmahaaga. Way fududahay in la qaado waxayna leedahay awood waafajin xoog leh. Waa kaaliyahaaga saxda ah ee kalluumeysiga banaanka.
Sanduuqa Qalab Soo Jiidashada ee Kalluumeysiga
Santuuqa kaydinta hufan ee kor loo qaaday wuxuu leeyahay dherer ku dhow toban sintimitir, booska lagu keydiyo ayaa ka awood badan. Naqshadda hufan waxay kuu oggolaaneysaa inaad si cad u aragto waxa ku jira gudaha waana sahlan tahay in dib loo helo. Ka samaysan BPA - qalab caag ah oo bilaash ah, bey'adeed u roon oo adkeysi leh.
Dambiisha Sibo & Shandadaha Fitings Co., Ltd. Jiniang